“အဓိက ကတော့ ... Categories: VOA Radio မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၅း၃၀-၆း၃၀ - မေ 19, 2013
Categories: VOA Radio Cannes ရုပျရှငျပှဲတျော
Sat, 05/18/2013 - 14:08
နာမယျကွီး နိုငျငံတကာ ရုပျရှငျပှဲတျော လိငျတူခဈြသူတှကေို ရှံမုနျးမှု ဆနျ့ကငျြရေး
လိငျတူခဈြသူ သမ်မတဦးသိနျးစိနျရဲ့ အမရေိကနျခရီးစဉျ အလားအလာ
ကာကှယျရေး ဝနျကွီး ဒုဗိုလျခြုပျကွီး ဝလှေငျနဲ့ ပွညျထဲရေး ဝနျကွီး ဒုဗိုလျ ခြုပျကွီး ကိုကိုတို့ ဟာ မွနျမာ အမရေိကနျ နှဈနိုငျငံ လုံခွုံရေး ပူးပေါငျး ဆောငျဖို့ ဆှေးနှေးမယျ။
သိနျးစိနျ, အိုဘားမား ဦးကျော်သူတို့ အမှိုက်ကောက်မည့်အစီအစဉ်အား ရပ်ဆိုင်းပေးပါရန်
Sat, 05/18/2013 - 10:26
“ ဖွ ” အဆောက်အဦးတစ်ခု တည်ဆောက်မည်ဆိုပါက အခြေခံအောက်ခြေအုတ်မြစ် ခိုင်မာမှုရှိရန် အရေးကြီး လှသည်။ ကျန်းမာသန်စွမ်းမှုဖြစ်ရန် သန့်ရှင်းမှုသည် အဓိကကြသည်။ တိုင်းပြည်၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ထိုတိုင်း ပြည်၏ အစိုးရနှင့် ပြည်သူလူထုတို့၏ ပူးပေါင်းစွမ်းဆောင်မှုသည် အရေးပါလှသည်။ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံထူထောင်မှု သည် ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူလူထုတို့၏ စောင့်ထိန်းရမည့် စည်းကမ်းများသည် အဓိကဖြစ်တော့သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးသည် ကမ္ဘာ့ အလယ်တွင် နာမည်ကောင်းဖြင့်ထင်ရှား၊ ကျော် ကြား၊ စံနမှုနာဖြစ်စေမည့် ခေတ်မှီတိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးသန့်ရှင်းသော ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သစ်ဆီသို့ အင်တိုက်အားတိုက် အားမာန်ပြည့်ဝစွာဖြင့် စတင်ချီတက်မှုကို ပြုလုပ်နေချိန်တွင် ပြည်သူလူထုတို့၏အားထားရာ၊ ပြည်သူလူထုတို့တင် မြှောက်ထားသော သန့်ရှင်းသော အစိုးရအဖွဲ့အစည်း (Clean Governance) နှင့် ပြောင်းလဲမှု (Change)ကို ပြုလုပ် လိုသော နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးမှလည်း ယင်းကဲ့သို့ တိုင်းပြည်တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်းတို့အား ပုံဖော်မှုပြုရာ တွင် အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ (လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ၊ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ) နှင့်အတူ လက်တွဲပုံဖော်ရန် အရေးကြီးကြောင်း တရားဝင်အများပြည်သူလူထုတို့အား ရေဒီယိုမှ၎င်း၊ နိုင်ငံတော်ထုတ် သတင်းစာများမှ၎င်း၊ ဂျာနယ်၊ စာစောင်များတွင်၎င်း မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့မှုများ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ယခုအချိန် ကာလတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်သည် ကမ္ဘာ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်သော အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်၍ အမေရိကန်နိုင်ငံသမ္မတ ဘာရက် အိုဘားမားနှင့်လည်း တွေ့ဆုံကာ အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ သည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံထူထောင်ရာတွင် အဓိကကျသည့်အကြောင်း အချက်အလက်များအား ဆွေးနွေးကြမည်ဟု လည်းသိရှိရသည်။ ထို့အပြင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်၊ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်သည်လည်း ယခုနှစ်မဟာသင်္ကြန်မကျရောက်မှီ တစ်ရက်အလိုတွင် ပြည်သူလူထုတို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသော “ပေးဆပ်သူများ” မဟာသင်္ကြန်သံချပ်အဖွဲ့မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်သို့ သွားရောက်ဖျော်ဖြေမှုပြုလုပ်ခဲ့ရာတွင် ဖျော်ဖြေပွဲအပြီးတွင် ဂုဏ်ပြုဆုငွေပေးအပ် ခဲ့စဉ် “တိုင်းပြည်ထူထောင်ရာတွင် သားတို့ရဲ့ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေရဲ့ အင်အားတွေ အများကြီးလိုအပ်တယ်၊ အခုလိုတက်တက်ကြွကြွ အများပြည်သူလူထုအတွက် လုပ်ဆောင်ပေးမှုများအပေါ် အမေ အရမ်းကျေနပ်ဝမ်းသာ တယ်၊ အခုလိုပေးဆပ်မှုများအပေါ် ကျေးဇူးလည်းအထူးတင်တယ်” ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)အနေဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း (အခမဲ့) နာရေးကူညီပံ့ပိုး ပေးမှုများကို ပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်hအပြင် မြန်မာပြည်တွင်းရှိ တိုင်း/ မြို့နယ်/ ရပ်ကွက်များရှိ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့များအတွက် လိုအပ်သော နိဗ္ဗာန်မော်တော်ယာဉ်၊ နိဗ္ဗာန်ရေယာဉ်၊ နိဗ္ဗာန်ယာဉ် ထော်လာဂျီ၊ နိဗ္ဗာန်လက်ဆွဲလှည်းယာဉ်၊ စတီးဗန်း၊ အလူမီနီယံအခေါင်းအဖုံး၊ မီးသင်္ဂြိုလ်စက် စသည့်နာရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သော နိဗ္ဗာန်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများအားလည်း လှူဒါန်းမှုတို့ကို ပြုလုပ်ပေးကာ နှစ်လတစ်ကြိမ်ခန့် မြန်မာတစ်ပြည်လုံးရှိ မြို့နယ်/တိုင်းဒေသများတွင် ဖွဲ့စည်းထူထောင်ထားသော လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များအား လူမှုရေးစွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်းများအားလည်း မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ရုံးချုပ်တွင် (Camp) စခန်းသွင်း၍ သင်ကြားပေးလျှက်ရှိသည်။ ကျန်းမာရေးကူညီစောင့်ရှောက်ကုသပေးမှုအဖြစ်လည်း ရန်ကန်မြို့ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်တွင် သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း ဟူ၍ မျက်စိခွဲစိတ်ကုသပေးမှု၊ အရိုးအကြော၊ အရိုး အဆစ်၊ ကိုယ်အင်္ဂါပြန်လည်သန်စွမ်းရေး (Physiothraphy)၊ ကလေး၊ အရေပြား၊ နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း၊ ခွဲစိတ်(အသေးစား)၊ OG(ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်)၊ သွား၊ အထွေထွေ ရောဂါဝေဒနာရှင်များအား (အခမဲ့) နေ့စဉ်လ ကုန် နောက်ဆုံးရက်မှအပ ကုသပေးလျှက်ရှိပြီး နယ်ဒေသများသို့လည်း နယ်လှည့်ဆေးကုသပေးမှုလုပ်ငန်းအား ပရဟိတဆရာဝန်ကြီးများ၊ ပရဟိတလူငယ်လူရွယ်များနှင့် လက်တွဲကာ သွားရောက်ကုသပေးလျှက်ရှိသည်။ ၄င်း အပြင် ပြည်မြို့၊ ကြို့ပင်ကောက်မြို့၊ ပဲခူးမြို့များတွင်လည်း သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း အခွဲများဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီး ဒေသခံပရဟိတလူငယ်များ ပရဟိတဆရာဝန်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ ကုသိုလ်ဖြစ် အများပြည်သူအကျိုးအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်း ကူညီမှုများကို ပေးဆပ်ကာ အစိုးရဆေးရုံကြီးများတွင် လိုအပ်လျှက်ရှိသော ခွဲစိတ်ခန်းသုံး ကုတင်၊ ဆေးကုသမှု အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများနှင့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ နယ်ဆေးခန်းများအတွက်လည်း လစဉ် ဆေးဝါးထောက်ပံ့မှုများအားလည်း ပြုလုပ်ပေးလျှက်ရှိသည်။ ပညာရေးကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ သုခအလင်း ပညာဒါန ဟူ၍ အမည်တပ်ကာ ဘုန်းတော်ကြီးပညာသင်ကျောင်းများမှအစ အမေ့အိမ်ပညာရေးကျောင်းများ၊ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စာသင်ကျောင်းများ၊ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းပညာရေး၊ ဆေးကျောင်းတက်ရောက်နေသော ဆရာဝန် လောင်းလျာများအတွက် ဆရာဝန်ဖြစ်သည်အထိ ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ငွေများပေးဆပ်မှု၊ ဘွဲ့ရကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ အား အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးဖြစ်သော LCCI စာရင်းအင်းပညာသင်တန်းများ၊ ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှု အတတ်ပညာ (Hospitality) သင်တန်း၊ ကွန်ပြူတာသင်တန်း၊ အင်္ဂလိပ်စာ 4Skills သင်တန်း၊ ပန်းချီသင်တန်းများနှင့် ကလေး သူငယ်များအတွက် အနာဂတ်တွင်အလိုအပ်ဆုံးသော ယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်တန်းများအား (အခမဲ့) သင်ကြားပို့ချ ပေးကာ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်ရှိ ဆရာ/ဆရာမများအတွက်လည်း (TOT) သင်တန်းများအားလည်း (Camp)စခန်း သွင်း၍ သင်ကြားပေးလျက်ရှိသည်။ နယ်ဒေသများရှိ ကိုယ်ထူကိုယ်ထစာကြည့်တိုက်များအတွက်လည်း စာအုပ် စာပေများအား စဉ်ဆက်မပြတ်လှူဒါန်းမှုများကို ပြုလုပ်ပေးလျှက်ရှိကာ နယ်လှည့်ပညာ သင်ကြားမှုများအားလည်း ပရဟိတဆရာ/မများနှင့် လက်တွဲ၍ နယ်ဒေသများသို့ သွားရောက်ပညာဒါနပြုလုပ်ပေးကာ အချို့သော ဒေသများ တွင် ပျက်စီးယိုယွင်းနေသော အစိုးရစာသင်ကျောင်းများအားလည်း ပြန်လည်ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းပေးလျှက်ရှိသည်။ ထို့အပြင် သဘာဝဘေးဒါဏ်မျာဖြစ်သော ရေဘေး၊ မီးဘေး၊ လေဘေးသင့်ဒေသများသို့လည်း အချိန်နှင့် တပြေးညီ ပရဟိတလူငယ်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ သွားရောက်လှူဒါန်းကူညီ ဖေးမမှုများကိုလည်း စဉ်ဆက်မပြတ်ပြုလုပ်ပေးခဲ့သည့် အပြင် စစ်ဘေးသင့်ဒေသများရှိ စစ်ဘေးဒါဏ်ခံ တိုင်းရင်းသားမိဘပြည်သူအပေါင်းတို့အား၎င်း၊ လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခ ကြောင့် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်သွားကြရရှာသော ပြည်သူပြည်သား အပေါင်းတို့ထံသို့၎င်း၊ လှူဒါန်းကူညီဖေးမအားပေး စကားများကို ပြောကြားကူညီခဲ့ကြသည်။ ၄င်းအပြင် မြန်မာပြည်တွင်း နွေရာသီကာလများတွင် သောက်/သုံးရေ ရှားပါး၊ နည်းပါး၊ လုံးဝမရှိသော အရပ်ဒေသများသို့လည်း ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကာ ရေတွင်းရေကန်များ၊ အဝီစိတွင်းများ တူးဖော်ပေးခြင်းများ၊ ရေပိုက်လိုင်းများ သွယ်တန်းပေးခြင်းများ၊ ရေသိုလှောင်ရန် အုတ်ကန်များ တည်ဆောက်ပေးမှုများ၊ ရေစုပ်စက်များ တပ်ဆင်ပေးမှုများအားလည်းပြုလုပ်ပေးကာ သောက်/သုံးရေရှားပါးသော လက်လှမ်းမှီရာ အရပ်ဒေသများဖြစ်ကြသော ဒေါပုံ၊ ဒလ၊ ပဲခူး၊ မှော်ဘီ၊ ခရမ်း၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်နှင့် မြောက်ဒဂုံ အရပ်ဒေသများသို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ ဝယ်ယူထားသော ရေဂါလံ (၃၆ဝဝ) ဆံ့ မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် သွားရောက်ကာ ရေကုသိုလ်လုပ်ငန်းအား ပေးဆပ်လျှက်ရှိသည်။ ယခုဆိုလျှင် ကမ္ဘာ့ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှု၊ အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးမှုအား ကာကွယ်မှုပြုရန်အတွက် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျုင် စိမ်းလန်းစိုပြေရေးအတွက်လိုက်လံ၍ လမ်းဘေးတွင် စည်ပင်သာယာအဖွဲ့မှ စိုက်ပျိုးထားပေးသော အရိပ်ရသစ်ပင်များအားလည်း ရှင်သန်ကြီးထွားလာရန်အတွက် ရေလောင်းပေးခြင်းလုပ်ငန်းရပ်အား “အစိမ်းရောင် စစ်ဆင်ရေး” ဟူ၍ ပထမခြေလှမ်းအဖြစ် မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ဗိုလ်မှူးဗထူးလမ်းတစ်လျှောက် လုပ်ဆောင်ပေးနေပြီ ဖြစ်သည်။ ထပ်မံ၍ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ရုံးချုပ်တည်ဆောက်ရန်အတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ချမှတ် ပေးလိုက်သော အမှတ် ၁၃/က၊ ဗိုလ်မှူးဗထူးလမ်း၊ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်တွင် အဆောက်အဦးများတည်ဆောက်မှုတွင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသောအမှိုက်များ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ ကြွပ်ကြွပ်အိတ် ပလပ်စတစ်များ၊ ကော်ဗူးများ၊ သံတိုသံစများနှင့် ပြည့်နှက်ဖုံးလွှမ်းနေသော (၂) ဧကကျော်မြေကွက်အား ပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့ရသော အတွေ့အကြုံဆိုးများ၏ ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်များကြောင့်၎င်း၊ ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီး တည်ဆောက်ရာတွင် အဓိက အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သော လူ့စည်းကမ်း၊ ပြည်သူလူထုတို့ စောင့်ထိန်းရမည့်ကျင့်ဝတ်များထဲတွင် ပါဝင်သော စည်းမဲ့ ကမ်းမဲ့ အမိူက်ပစ်မှုများအား ပညာပေးလှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်၎င်း၊ မြေသြဇာဖြစ်စေမည့်အမှိုက်နှင့် ပြန်လည်၍ အသုံးပြု နိုင်သည့်အမှိုက် (စက္ကူ၊ သစ်ရွက်၊ အဝတ်စုတ်နှင့် ရေသန့်ဗူးခွံ၊ သံဗူး၊ ပုလင်း၊ မီးချောင်း … ) စသည့် စွန့်ပစ် အမှိုက် များအား စနစ်တကျခွဲခြား၍ စွန့်ပစ်ကြရန် သင်္ခန်းစာပေးလိုသည့်ဆန္ဒအရလည်းကောင်း၊ အမှိုက်ကအစ ပြဿဒ် မီးလောင်မှုမဖြစ်စေရန် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမှုကို ပြုလုပ်ကြရန်အတွက်၎င်း၊ လူဦးရေ (၅.၆) သန်းကျော်ရှိသော ရန်ကုန်မြို့နှင့် ရန်ကုန်မြို့စည်ပင်သာယာသန့်ရှင်းရေး လုပ်သားဦးရေ (၅ဝဝဝ) ကျော်ဟူသော အချိုးအစားအရ၄င်း၊ ကျွန်တော်တို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့အနေဖြင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု၊ မြတ်စွာဘုရား၏ ဗြဟ္မစိုရ်တရားလေးပါးအား လက်ကိုင်ပြုပြီး နိုင်ငံထူထောင်မှုအချိန်ကာလတွင် တစ်ဖက်တစ်လမ်း ပံ့ပိုးကူညီပေးမှုအဖြစ် ၁၁.၅.၂ဝ၁၃ စနေနေ့တွင် ပန်းဆိုးတန်းဆိပ်ကမ်းဧရိယာအတွင်းရှိ ခရီးသည်နားနေဆောင်နှင့် ဆိပ်ခံဗောတံတားနှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်များ၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် လူစည်ကားသည့် မြောက်ဥက္ကလာပအဝိုင်း ကားမှတ်တိုင်အနီး ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ စွန့်ပစ်ထားသောအမှိုက်များတို့အား ကောက်ယူသိမ်းဆည်း ခြင်းများကိုလိုက်လံ၍ လူမှုရေးသမားများနှင့် အတူတကွလက်တွဲ လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ကြသည်။ မြို့နယ်ဒေသခံ မိဘပြည်သူများမှာလည်း ဝမ်းသာကြည်နူးစွာဖြင့်အတူလက်တွဲ ကူညီပေးခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ ကောက်ယူခဲ့ သောအမှိုက်များအားလည်း မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ထားဝယ်ချောင်သုဿန်အနီးရှိ အမှိုက်ပုံသို့ စနစ်တကျစည်းကမ်း ရှိစွာသွားရောက် စွန့်ပစ်ခဲ့ကြသည်။ ယခုထပ်မံ၍ ၁၈.၅.၂ဝ၁၃ စနေနေ့ ညနေ (၃းဝဝ) နာရီအချိန်တွင်လည်း ရန်ကုန်မြို့ ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ လူသွားလူလာ ရုံးတက်/ရုံးဆင်း ထူထပ်များပြားလှသော မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံ တစ်လျှောက် လူမှုရေးသမားများ၊ ဂီတပညာရှင်များ၊ စာပေနှင့် စာနယ်ဇင်းပညာရှင်များနှင့် လက်တွဲကာ အင်တိုက် အားတိုက်သန့်ရှင်းမှုအား ပြုလုပ်ကြမည်ဖြစ်တော့သည်။ ယခုတစ်ကြိမ်တွင် ဂီတပညာရှင်များ၊ စာပေပညာရှင်များ ပါဝင်လာရခြင်းမှာ ပြည်သူပြည်သားများအား အသိပညာပေးမှုတွင်ထိရောက်သည့် လက်နက်ဖြစ်သော အနုပညာ စွမ်းအားများကို တာဝန်သိသိ၊ တာဝန်ရှိရှိနှင့် တာဝန်ယူကြကာ အများပြည်သူအတွက် ပေးဆပ်ကြမှုတစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့၏ အနာဂတ်ကာလအတွက် စိတ်ကူးအိမ်မက်များသည် မြို့နယ်တစ်ခုချင်း၊ ရပ်ကွက်တစ်ခု ချင်း၊ မြို့တစ်မြို့နှင့်တစ်မြို့ချင်း၊ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းတစ်ခုချင်း၊ သန့်ရှင်းစိုပြေလှပမှုများကို အပြိုင်အဆိုင်အနိုင် လုပ် ဆောင်ကြမည်ဆိုပါက နိုင်ငံတော်တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး ပြောကြားခဲ့သလို “(၄) လအတွင်း စင်္ကာပူနိုင်ငံကဲ့သို့ ဖြစ်စေ ရမယ်” ဟူသောစကားမှာ မှန်ကောင်းမှန်ပေလိမ့်မည်။ သို့သော် ယနေ့ ၁၈.၅.၂ဝ၁၃ စနေနေ့ နံနက် (၉းဝဝ) နာရီခန့်အချိန်တွင် ကျွန်တော့်ထံသို့ တယ်လီဖုန်း ဝင်လာသည်။ “ဦးကျော်သူတို့ အမှိုက်ကောက်မည့်အစီအစဉ်အား ရပ်ဆိုင်းပေးပါရန်” ဟူ၍ ရန်ကုန်မြို့ စည်ပင် သာယာရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဌာန အရာရှိကြီးတစ်ဦးမှ ဆက်သွယ်ပြောကြားလာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ပေးဆပ်ကြရန် စုရပ်ဖြစ်သော ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း ထိပ်ရှိ “ရွှေလင်ဗန်း” လ္ဘက်ရည်ဆိုင်သို့သွားရောက်ကာ အစီအစဉ်ဖျက်သိမ်းကြောင်း ဂီတ၊ စာပေလူမှုရေးသမား များ၊ ရပ်မိရပ်ဖပြည်သူလူထုများနှင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းအားစိတ်ဝင်စား၍ လာရောက်ကြသော မူလတန်းအရွယ် ကလေးငယ်များကို ဦးဆောင်၍ခေါ်ယူလာသော BG အဖွဲ့သားများအား ဝမ်းနည်းစွာဖြင့် အကြောင်းကြားခဲ့ရတော့ သည်။ အပြန်လမ်းတစ်လျှောက် ကျွန်တော်တွေးတောမိတော့သည်။ ကျွန်တော်တို့ လူမှုရေးသမားများသည် နိုင်ငံတော်အား နှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးကြမည့်သူများမဟုတ်၊ နိုင်ငံတော်အား ဆူပူမှုဖြစ်အောင်လုပ်မည့်သူများ မဟုတ်၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းသော ရေပြင်အား ဂယက်ထဆူပွက်စေမည့် သူများမဟုတ်၊ ငြိမ်းချမ်းမှုကိုသာ လိုလား ကြသည့်၊ စည်းကမ်းရှိမှုကိုသာလိုလားကြသည့် ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ရုပ်/စိတ်တို့ကိုသာ လိုလားကြသည်။ စိမ်းလန်းသာယာမှုကို လိုလားကြသည်။ ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး ပညာရေးတိုးတက်မှုတို့ကိုသာ လိုလားကြသည်။ အဘယ့်ကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းမှုလုပ်ငန်းအား ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးမှုကို တားမြစ်ရသနည်း … ? ပိတ်ဆို့ရသနည်း … ? ဟန့်တားရသနည်း … ? ဤကဲ့သို့သော အသေးငယ်ဆုံး ပါမွှားလုပ်ငန်းလေးတစ်ခုကိုပင် တား မြစ်ခံရခြင်းအတွက် ကျွန်တော့်အတွက် အဖြေရှာမရ။ ထို့ကြောင့် အများပြည်သူအပေါင်းတို့အား တရားဝင်ကြေငြာ ထားသော အမှိုက်ကောက်မည့်အစီအစဉ်အား ဖျက်သိမ်းရခြင်းအကြောင်းကို အများပြည်သူတို့ထံသို့ တရားဝင် ပြန်လည်ပြောကြားရမည့် တာဝန်တစ်ရပ်ဖြစ်ပေါ်လာရသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် အများပြည်သူလူထုအား သတင်း ပါးခြင်း၊ သတင်းပွားခြင်း၊ သတင်းဖွခြင်းပင် ဖြစ်တော့သည်။ (အမှိုက်မကောက်ရ၍ အမှိုက်ဖွရန်မဟုတ် ! ။ အမှိုက်မကောက်ရ၍ သတင်းပါးခြင်း၊ သတင်းပွားခြင်း၊ သတင်းဖွခြင်း သက်သက်မျှသာဖြစ်သည် . . . ) ကျော်သူ
http://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWV Categories: Myanmar News မွန်ပြည်နယ်မှာ ၁၄ ရွာ စုပေါင်းဆန္ဒပြ
Sat, 05/18/2013 - 10:14
မွန်ပြည်နယ် ပေါင်မြို့မှာ မီတာတပ်ဆင်ခငွေကျပ် ဆယ်သိန်းတောင်းခံတာကြောင့် မကျေနပ်ကြတဲ့ ကျေးရွာ ၁၄ ရွာက ဒေသခံပြည်သူတွေဟာ ဒီကနေ့ ရပ်ကွက် ၃ ခုမှာ လှည့်လည်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ မီတာပုံးတပ်ဆင်ခဟာ ပြေစာပေါ်မှာ ကျပ်တစ်သိန်းပဲ ဖေါ်ပြထားပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာတော့ ကျပ် ၁၀ သိန်း တောင်းခံတာကြောင့် ပေါင်မြို့ဒေသခံ ၁၅၀ လောက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး၊ ----
သတင်း အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
http://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWV Categories: Myanmar News မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု နှင့် ဒီမိုကရေစီ
Sat, 05/18/2013 - 10:03
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ ဖော်ဆောင်နေတဲ့ အချိန်မှာ အာဏာပိုင်တွေ၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေ ဘာတွေဖော်ဆောင်နေသလဲ၊ ဘာ အားနည်းချက်တွေ ရှိနေသလဲ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေပြုပြင်ပြောင်းလဲ သင့်တာတွေကို ဆွေးနွေး သုံးသပ်ခဲ့သလိုပဲ နိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဖော်ဆောင်တဲ့နေရာ မှာ မြန်မာ လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ မြန်မာပြည်သူတွေ အနေနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ စရိုက်သဘာဝတွေ၊ အလေ့အကျင့် ဘာတွေကို ပြုပြင်ဖို့ လိုအပ်ပါသလဲ။ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု၊ စရိုက်သဘာဝ အားလုံးဟာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ပါသလား ဆိုတာ ... Categories: VOA Radio မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု နှင့် ဒီမိုကရေစီ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ ဖော်ဆောင်နေတဲ့ အချိန်မှာ အာဏာပိုင်တွေ၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေ ဘာတွေဖော်ဆောင်နေသလဲ၊ ဘာ အားနည်းချက်တွေ ရှိနေသလဲ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေပြုပြင်ပြောင်းလဲ သင့်တာတွေကို ဆွေးနွေး သုံးသပ်ခဲ့သလိုပဲ နိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဖော်ဆောင်တဲ့နေရာ မှာ မြန်မာ လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ မြန်မာပြည်သူတွေ အနေနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ စရိုက်သဘာဝတွေ၊ အလေ့အကျင့် ဘာတွေကို ပြုပြင်ဖို့ လိုအပ်ပါသလဲ။ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု၊ စရိုက်သဘာဝ အားလုံးဟာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ပါသလား ဆိုတာ ... Categories: VOA Radio AIDS ရောဂါပိုးထက် ပို၍ ကြောက်စရာကောင်းသော ရောဂါပိုးသစ်တစ်မျိုး ထပ်မံတွေ့ရှိ
လွန်ခဲ့သော နှစ်နှစ်ခန့်က ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ပြည့်တန်ဆာ အမျိုးသမီး တစ်ဦးထံမှ ပထမဆုံး ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့သည့် ရောဂါပိုး တစ်မျိုးသည် ခုခံအား ကျဆင်းမှုကို ပို၍ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေရှိကြောင်း US National Coalition of STD Directors အဖွဲ့မှ William Smith က သတိပေး ပြောကြား လိုက်သည်။ ---သတင်း အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
http://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWV Categories: Myanmar News လှိုင်သာယာက ကိုးရီးယား အထည်ချုပ်စက်ရုံမှာ ဆန္ဒပြ
Sat, 05/18/2013 - 09:55
ရန်ကုန်တိုင်း၊ လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန်မှာရှိတဲ့ ကိုရီးယားနိုင်ငံသားပိုင် ရက်စ် (YES) အထည်ချုပ်စက်ရုံမှာ အလုပ်သမား တစ်ထောင်ကျော်လောက်ဟာ လုပ်ခလစာ တိုးမြှင့်ရရှိဖို့ ဒီကနေ့ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ နေ့တွက်ကြေး ကျပ်နှစ်ရာတိုးပေးဖို့၊ ရှားပါးစရိတ်ပေးဖို့၊ နှစ်စဉ်အပို ဆုကြေးတွေ မျှမျှတတပေးဖို့စတဲ့ အချက် ၃ ချက်ကို မနေ့နေ့လည်ကတည်းက စတင်တောင်းဆိုခဲ့ကြတာလို့ ဆန္ဒပြနေတဲ့ အလုပ်သမတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ ---သတင်း အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
http://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWV Categories: Myanmar News သမ္မတဦးသ်ိန်းစိန် ၀ါရှင်တန်မြို့တော်ဆိုက်ရောက်
Sat, 05/18/2013 - 09:44
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ဟာလာမယ့် တနင်္လာနေ့ကြရင် အမေရိကန်သမ္မတ ဘရက်အိုဘားမားနဲ့ ၀ါရှင်တန် က သမ္မတ အိမ်ဖြူတော်မှာ တွေ့ဆုံကြဖို့ ရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုတွေ့ဆုံကြရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ... Categories: VOA Radio သမ္မတဦးသ်ိန်းစိန် ၀ါရှင်တန်မြို့တော်ဆိုက်ရောက်
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ဟာလာမယ့် တနင်္လာနေ့ကြရင် အမေရိကန်သမ္မတ ဘရက်အိုဘားမားနဲ့ ၀ါရှင်တန် က သမ္မတ အိမ်ဖြူတော်မှာ တွေ့ဆုံကြဖို့ ရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုတွေ့ဆုံကြရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ... Categories: VOA Radio မလေ ၁၇ တမိနဈ သတငျး ဗီဒီယို
မလေ ၁၇ တမိနဈ သတငျး ဗီဒီယို
တမိနဈ သတငျး ဗီဒီယို မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ပြန်စဖို့ တရုတ်လိုလား
Sat, 05/18/2013 - 08:59
တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ ရေအား လျှပ်စစ် ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်ရေး စီမံကိန်းကို ပြန်လည် အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ဆန္ဒရှိနေကြောင်း တရုတ် အာဏာပိုင်တွေဘက်က ထုတ်ဖော်ပြောဆို တယ်လို့ ဒီကနေ့ တရုတ်နိုင်ငံက ပြန်လည်ရောက် ရှိလာတဲ့ NLD အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်က RFA ကို ပြောပါတယ်။ ---သတင်း အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
http://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWV Categories: Myanmar News လွတ်မြောက်လာသူအကျဉ်းသားများရဲ့ ပြောကြားချက်
Sat, 05/18/2013 - 08:54
Categories: Myanmar Blogs ကျောင်းအပ်ချိန် အလှူငွေကောက်ခံပါက ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်မည်
အစိုးရသစ် လက်ထက် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ တိုက်ဖျက်ရေး စီမံချက်များ ကြောင့် ယခုပညာသင်နှစ် ကျောင်းအပ်ချိန်တွင် သက်ဆိုင်ရာ ကျောင်းအုပ်က ကျောင်းသားမိဘများ ထံမှ အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် အလှူငွေ ကောက်ခံသည်ကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိလျှင် ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်သည် အထိ အရေးယူ အပြစ်ပေးသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း တိုင်းပညာရေးမှူး တစ်ဦးက The Voice သို့ပြောကြားသည်။ ---
http://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWV Categories: Myanmar News အာဏာရှင်များကို တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားစေတဲ့ ဇူလိုင် (၇) လျှို့ ဝှက်။
Sat, 05/18/2013 - 08:48
By Nik Nayman၁၉၈၃-၈၄ခုနှစ်ထုတ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှစ်ပါတ်လည်မဂ္ဂဇင်းစာစောင် မျက်နှာဖုံးဒီဇိုင်းဟာ ၁၉၆၂ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (ရ) ရက်နေ့ မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုကို လျှို့ ဝှက်စွာ ပြန်လည်ဖော်ကျူးခဲ့တယ်ဆိုတာ သိရှိသူ အင်မတန်နည်းပါးခဲ့ပါတယ်။(မဂ္ဂဇင်းဓါတ်ပုံများအား ဖေါ်ပြထားပါတယ်။)ဒါပေမယ့် ကျောင်းသားထုအတွင်းနဲ့တက္ကသိုလ်နယ်မြေတွေမှာ ဒီမဂ္ဂဇင်းမျက်နှာဖုံးဒီဇိုင်းအကြောင်းလေးဟာ တိုးတိုးတိတ်တိတ်နဲ့ပျံ့ နှံ့ ခဲ့ပါတယ်။ သိပ်မကြာပါဖူး တစ်ဆင့်စကားတစ်ဆင့်နားကနေ ဒီအကြောင်း မဆလစစ်အစိုးရနားထဲကို ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ မဆလအာဏာရှင်တွေဟာ ထိတ်လန့် တကြားနဲ့ဒီမဂ္ဂဇင်း ဖြန့် ချီနေမှုကို တရားဝင်မကြေညာဘဲ ပိတ်ပင်ပါတော့တယ်။ စစ်စုံထောက်တွေဟာလည်း ကမန်းကတန်း ဒီမဂ္ဂဇင်းတွေကို စာအုပ်ဆိုင်တွေကနေ လိုက်လံသိမ်းဆည်းပါတော့တယ်။ လက်ဝယ်ရှိနေသူများကိုလည်း ဒီအကြောင်းတွေ မပြောဖို့ ၊ မဂ္ဂဇင်းကို ပြန်အပ်ဖို့ချိမ်းခြောက်ပြောဆိုပါတော့တယ်။ဘာဖြစ်လို့ များ ဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှစ်ပါတ်လည်မဂ္ဂဇင်းဟာ အာဏာရှင်တွေကို ထိတ်လန့် တုန်လှုပ်စေရတာလည်း။မဂ္ဂဇင်းထဲပါ ရေးသားထားတဲ့ ကဗျာတွေ၊ ဆောင်းပါးတွေ၊ ကာတွန်းတွေ၊ ၀တ္တုတိုတွေ အစရှိတာတွေဟာ မဂ္ဂဇင်းမထုတ်ခင်ကတည်းက မဆလရဲ့ကြိုးကိုင် စာပေစီစစ်ရေးနဲ့ ဆင်ဆာတည်းဖြတ်ရေးအဖွဲ့ က မဆလအစိုးရကို ညှိစွန်းစေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကို ခွင့်မပြုဘဲ တည်းဖြတ် ချန်ဖြတ် ပယ်ထုတ်ပြီးသားပါ။ကံအားလျော်စွာဘဲ ဒီအကြောင်းအရာတွေ မသိခင်မှာ၊ ကျွန်တော်လက်ထဲမှာ နှစ်ပါတ်လည်စာစောင်အဖြစ် အမှတ်တရသိမ်းထားရအောင်ဆိုပြီး ၀ယ်ယူခဲ့လို့ဒီမဂ္ဂဇင်းတစ်အုပ်ရှိနေပါတယ်။ မဆလစစ်အစိုးရကို ထိခိုက်စေရလောက်တဲ့ ရေးသားချက်များ မတွေ့ ရပါဖူး။စာပေ၀ါသနာပါသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရော၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရော မြတ်နိုးစွာနဲ့ ဘဲ ဒီမဂ္ဂဇင်းစာအုပ်ကို အခေါက်ခေါက် ဖတ်ပြီးသားပါ။ဒါပေမယ့်ဗျာ၊ ဒီမဂ္ဂဇင်းမျက်နှာဖုံးဒီဇိုင်းဟာ ၁၉၆၂ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (ရ)ရက်နေ့မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုကို လျှို့ ဝှက်စွာ ပြန်လည်ဖော်ကျူးတာလို့ကြားရသိရတဲ့အခါမှာတော့၊ ဒီမဂ္ဂဇင်းကို လိုက်သိမ်းနေတယ်လို့ကြားရတဲ့အခါမှာတော့ ကျွန်တော် အတော့်ကို စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ ဒါနဲ့ သိမ်းထားတဲ့နေရာကနေ ကမန်းကတန်းပြန်ရှာပြီး မျက်နှာဖုံးကိုကြည့်ကြည့်တယ်။ ဘာမှထူးခြားတာ မတွေ့ ဖူး။ ထပ်ခါထပ်ခါ ကြည့်တယ်၊ ဘာမှလည်းမတွေ့ ပါလားဆိုပြီးနေခဲ့ရာကနေ၊ နောင်တော်ကျောင်းသားကြီးတစ်ယောက်ကနေ ပြောပြမှဘဲ သိသွားတွေ့ သွားပါတော့တယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်ရဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ခေါ်ပြီး တိုးတိုးတိတ်တ်ိတ် လေး အဖန်ဖန်ကြည့်မိနေပါတော့တယ်။ကျွန်တော်မြင်တာက ဒီဟာ ဒီမှာ၊ ကျန်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေက သူတို့ မြင်တာ ဒီမှာ ဒီဟာဆိုပြီး ကြည့်လေမြင်လေဖြစ်နေပြီး၊ မမှီခဲ့တဲ့ ဇူလိူင် (ရ)ရက် ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုနဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အဦး ဖြိုချဖျက်ဆီးခံရမှုဟာ ကျွန်တော်တို့နောင်လာနောက်သား ညီတော်ကျောင်းသားတွေရဲ့ စိတ်အတွေးထဲမှာ ကိန်းအောင်းဝင်လာပါ တော့တယ်။ဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှစ်ပါတ်လည်မဂ္ဂဇင်းစာစောင် မျက်နှာဖုံးဒီဇိုင်း ရေးဆွဲခဲ့ကြသူတွေ၊ မဂ္ဂဇင်းစာစောင်ဖြစ်မြောက်ရေးမှာ ပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ ကျောင်းသားကြီးတွေကတော့ မဆလစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ ခေါ်ယူစစ်ဆေး မေးမြန်းထိန်းသိမ်းခြင်းကို ရဲဝန့် စွာနဲ့ ခံယူရပါတယ်။မဆလစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ ကျောင်းသားတွေအပေါ် ရက်စက်ယုတ်မာမှု သမိုင်းဟာ ဖုံးကွယ်လို့ မရအောင် ပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာတိုင်း မဆလအာဏာရှင်တွေဟာ သွေးခြောက်ခြားပြီး၊ ကျဆုံးခဲ့တဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ဝိညာဉ်ဟာ သူတို့ ကို ကြေက်လန့်တုန်လှုပ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ဒီ ၁၉၈၃-၈၄ခုနှစ်ထုတ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှစ်ပါတ်လည်မဂ္ဂဇင်းစာစောင် မျက်နှာဖုံးဒီဇိုင်းအကြောင်းကို သိသိချင်းမှာဘဲ ပိတ်ပင်တားဆီး ပြန်လည်သိမ်းခဲ့တာပါ။ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှစ်ပါတ်လည်မဂ္ဂဇင်းစာစောင် မျက်နှာဖုံးဒီဇိုင်းလေးမှာ ဘာတွေပါလဲ၊ ၁၉၆၂ဇူလိုင်လ (ရ)ရက်နေ့ မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုကို ဘယ်လို လျှို့ ဝှက်ပုံတွေ ဖေါ်ထားသလဲ ဆိုတာ ပုံများနဲ့ တစ်ကွ ပြန်လည်ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။ မှန်ဘီလူးလေးတစ်ခုနဲ့ အသေးစိတ်ကြည့်ရင်တော့ ကျွန်တော်ဖေါ်ပြထားတာထက် ပိုပြီးတွေ့ မြင်ကြရမှာပါ။ဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှစ်ပါတ်လည်မဂ္ဂဇင်း မျက်နှာဖုံးဒီဇိုင်းလေးကို ကြည့်ရင်းဖြင့်၊ ၁၉၆၂ခုနှစ်က နောင်တော်ကျောင်းသားကြီးများကို ဦးညွတ်အလေးပြုလိုက်သလို၊ နောင်လာနောက်သား ညီတော်ကျောင်းသား ကျောင်းသူအပေါင်းကိုလည်း အသိပေးလိုက်ပါတယ်။ ငါတို့ တစ်တွေရဲ့ကျောင်းသားသမိုင်း ဘယ်တော့မှ ပျောက်ကွယ်သွားမှာ မဟုတ်ပါဖူး ဆိုတာပါ။အာဏာရှင်အပေါင်းကိုလည်း ဒီမဂ္ဂဇင်းမျက်နှာဖုံးဒီဇိုင်းကို ပြန်လည်မြင်တွေ့စေပြီး၊ ကျုပ်တို့ ရဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကို တော်လှန်မှုဟာ ခောတ်အဆက်ဆက် ပြောင်းပေမယ့် ဆက်လက်တည်ရှိနေမယ်ဆိုတာ၊ ကျုပ်တို့ ကျောင်းသားတွေရဲ့ သွေးဟာ မခြောက်သေးဖူးဆိုတာ ကမ္ဘာမြေကြီးကို တိုင်တည်ပြီး သိစေအပ်တယ်။ ဒီမဂ္ဂဇင်းမျက်နှာဖုံးဒီဇိုင်းဟာ သင်တို့အာဏာရှင်တိုင်းကို တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားပါစေသောဝ်။(ဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှစ်ပါတ်လည်မဂ္ဂဇင်း မျက်နှာဖုံးဒီဇိုင်းလေးကိုကြည့် ဖို့ နဲ့ ၊ အသေးစိတ် လျှို့ ဝှက်ပုံများကို ကြည့်ကြပါ။)ဒီလို အာဏာရှင်များကို တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားစေတဲ့ တက္ကသိုလ်နှစ်ပါတ်လည် မဂ္ဂဇင်း စာစောင်ရဲ့ရှေ့ မျက်နှာဖုံးနဲ့နောက်မျက်နှာဖုံးတွေမှာ ဇူလိုင် (၇) နဲ့ပတ်သက်တဲ့ လျှို့ ဝှက်ပုံတွေ ထည့်သွင်းရေးထားတာတွေကို ပိုမိုတွေ့ လိုတွေ့ ငြား ရှာကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မျက်နှာဖုံးအရှေ့ နဲ့ အနောက်နှစ်ခုလုံးကို ကာလာပရင့် (colour print) နဲ့ပုံကြိး ထုတ်ပြီး မှန်ဘီလူးလေးနဲ့ကြည့်ကြည့်ဖို့ ပါဘဲ။အဆိုပါ နှစ်ပါတ်လည်မဂ္ဂဇင်းတွင်လည်း - မျက်နှာဖုံးတွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အတွင်းရှိ သစ်ပုတ်ပင်၊ သစ်ပုတ်ပင်၏ ပင်စည်မှာ လက်သီးလက်မောင်းတန်းနေသောပုံနှင့် နီညိုရောင် သွေးများ စီးဆင်းကျဆင်းနေပုံ၊ သစ်ပုတ်ပင်၏ အရွက်များမပါဘဲ သစ်ကိုင်းများသည် ကဒေါင်းပုံသဏ္ဍန်ပုံ၊ သခင်းကိုယ်တော်မှိုင်းနှင့် ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းပုံ၊ ဦးသန့် အုတ်ဂူတွင် သင်္ကန်းလွှမ်းခြုံထားပုံ၊ ကဒေါင်းပုံနဲ့စစ်သားမှ ဘက်နက်နဲ့ထိုးနှက်နေပုံ၊ သစ်ပုတ်ပင်၏ အကိုင်းအခက်များအကြားတွင် သမိုင်းဝင် ရက်စွဲများ ထည့်သွင်းဖေါ်ပြထားပုံတို့ပါရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ အဆိုပါ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှစ်ပါတ်လည် မဂ္ဂဇင်းများကို အာဏာရူးများမှ ချက်ချင်း လိုက်လံ သိမ်းဆည်းပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။အထူးမေတ္တာရပ်ခံလိုတာကတော့ - ယခု ဖေါ်ပြပြောဆိုခဲ့တဲ့ သမိုင်းဝင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် နှစ်ပါတ်လည် မဂ္ဂဇင်းများ လက်ဝယ်ရှိသူများအနေနဲ့အများပြည်သူ သိရှိရစေရန်အတွက် ပြန်လည်ဖေါ်ပြပေးပါလို့အထူး အနူးအညွှတ် မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်။နစ်နေမန်း။(ပုံအညွှန်း)။ပုံ (၁) - ၁၉၈၃-၈၄ခုနှစ်ထုတ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် နှစ်ပါတ်လည်မဂ္ဂဇင်းစာစောင် ရှေ့ မျက်နှာဖုံးဒီဇိုင်း။ပုံ (၂) - ကျဆုံးသွားသောကျောင်းသူကျောင်းသားများရဲ့ အခေါင်းအား သယ်ဆောင်လှည့်လည်နေသည့်ပုံ။ပုံ (၃) - အာဇာနည်ဟု စာတန်းပုံသဏ္ဍန်ရေးထိုးထားသော ကျောင်းသူကျောင်းသား တို့ ၏ အုတ်ဂူ။ပုံ (၄) - ကျောင်းသူကျောင်းသားများ စီတန်းလှည့်လည်နေကြပုံ။ပုံ (၅) - ဇူလိုင် (ရ) ရက်နှင့် (၈) ရက်နေ့ တွင် ကျဆုံးခဲ့သောသူများအကြောင်း ကျန်ရစ်သူ ကျောင်းသူကျောင်းသားအပေါင်းအား ရှင်လင်းပြနေပုံနှင့်၊ အာဏာရှင်အား ကမ္ဘာမကြေဖူးဟု ဖေါ်ကျူးထားသော လက်သီးဆုတ်ပုံ။ပုံ (၆) - ၁၉၈၃-၈၄ ခုနှစ်ထုတ် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်နှစ်ပါတ်လည် မဂ္ဂဇင်း စာစောင် နောက်မျက်နှာဖုံး ဒီဇိုင်း။ဒီ တက္ကသိုလ်နှစ်ပါတ်လည် မဂ္ဂဇင်း စာစောင် နောက်မျက်နှာဖုံးမှာလည်း နံပါတ် (၇) ပုံအား ပန်းပွင့်များဖြင့် ဗြောင်းပြန် ရေးဆွဲဖေါ်ကျူးထားတာကိုလည်း တွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။ Categories: Myanmar Blogs ဓမ္မတာဆန့်ကျင် လိင်ဆက်ဆံမှုဥပဒေ ပယ်ဖျက်ပေးရန် တောင်းဆို
Sat, 05/18/2013 - 08:43
ဓမ္မတာဆန့်ကျင် လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို တားမြစ်ထားသော ရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေပုဒ်မ ၃၇၇ ကို လွှတ်တော်က ပယ်ဖျက်ပေးရန် မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြို့နယ် ၁၃ မြို့နယ်မှ လိင်တူချစ်သူများက တောင်းဆိုကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး ပညာပေးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်မျိုးမင်းက The Voice သို့ ပြောကြားသည်။ ---
http://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWV Categories: Myanmar News သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၈-၅)
Sat, 05/18/2013 - 08:41
သစ်ထူးလွင် အရက်နှင့် ဘီယာချက်စက်ရုံ ခွင့်ပြုပေးသူများ သမိုင်းတွင် တရားခံဖြစ်မည်နယ်စပ်၌ တရားမ၀င်သစ်ထုတ်ခြင်း တိုးလာတာလောကြီး ဌာနေပြည်သူ့စစ် (၁)နှစ် အခမ်းအနားမြန်မာ အနီး ဘင်္ဂလာရေပြင်တွင် လူသေအလောင်း ၇ လောင်း ထပ်မံ တွေ့ရှိမေလ ၂၀ ရက်နေ့ ထုတ် The Voice Weekly Vol.9/No.19မေလ ၁၃ ရက်နေ့ ထုတ် ၇ ရက် ဈေးဝယ်လမ်းညွန်ဂျာနယ် အတွဲ(၃) အမှတ် (၃၉)လုံခြုံရေးအတွက် အာမခံမှု မပေးနိုင်၍ အမျိုးသမီး အလုပ်သမား စေလွှတ်မှု စောင့်ကြည့်တရားမဝင်နယ်စပ် ဖြတ်ကျော်သူ မြန်မာနိုင်ငံသား ၂၀ ဦး ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ် ကျခံရဖွယ်ရှိပြည်မြို့ ဧရာဝတီ မြစ်ကမ်းမှ အဆောက်အဦးကို မြို့ ခံတွေ ဆန္ဒပြ ကန့် ကွက်လှိုင်သာယာ ကြိုးကြာဖြူ လူသတ်မှုမှ တရားခံဖမ်းမိသမ္မတဦးသိန်းစိန် VOA မှာ နယ်ပယ်စုံပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ မေးမြန်းမှုကို ဖြေကြားမည် ရန်ကုန်မြို့တွင် စွန့်ပစ်အမှိုက်ပုံအတွက် မြေနေရာမရှိတော့အီရတ် ဘာသာရေး အုပ်စုကွဲတွေကြား တိုက်ခိုက်မှု လူ၆ဝ သေဆုံးမေလ ၁၇ ရက်နေ့ ထုတ် Focus Online ဂျာနယ် အမှတ် ၄၁မေလ ၁၆ ရက်နေ့ ထုတ် အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ(၂) အမှတ်(၁၉)မေလ ၁၆ ရက်နေ့ ထုတ် အိုင်တီတိုင်းမ် ဂျာနယ် အမှတ် ၈၇၀မေလ ၁၆ ရက်နေ့ ထုတ် ပြည်မြန်မာ သတင်း ဂျာနယ် အမှတ် ၈၇၀မေလ ၁၅ ရက်နေ့ ထုတ် Good Health ကျန်းမာရေးနှင့် အလှအပ ဂျာနယ် အမှတ် ၄၃၆သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အမေရိကန် ထွက်ခွာမအူပင်မှာ သိမ်းယူထားတဲ့ လယ်ယာမြေတွေ ပြန်ပေးမည်မြန်မာအပေါ် ဒဏ်ခတ်မှု သက်တမ်းတိုးဖို့ အမတ် Crowley အဆိုပြု အရက်နှင့် ဘီယာချက်စက်ရုံ ခွင့်ပြုပေးသူများ သမိုင်းတွင် တရားခံဖြစ်မည်Posted: 18 May 2013 07:04 AM PDTအသစ်ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းလိုက်သော မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်သည် ပထမဆုံး အစည်းအဝေးထိုင်သည့် နေ့တွင်ပင် ပြည်ပမှ ဘီယာချက် စက်ရုံ တစ်ရုံကို ပြည်တွင်း၌ တည်ဆောက်ရန်ခွင့်ပြု လိုက်ပြန်ပြီ ဖြစ်သည်။အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းလည်း တက်ရောက်ခဲ့သည်ဟုသိရရာ အဆိုပါ ခွင့်ပြုချက်သည် ယခင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်အဖွဲ့၏ လုပ်လက်စအလုပ်ကိုအသစ်တက်လာ သည့်အဖွဲ့က အတည်ပြုပေး လိုက်ရသည့် အဆင့်သာ ရှိပေလိမ့်မည်။မီဒီယာအသီးသီးက မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဘီယာချက်စက်ရုံများ လိုသည်ထက် ပိုမိုခွင့်ပြုနေသည့်အပေါ် ဝေဖန်ထောက်ပြရေးသားနေကြသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေအသစ်ပြန်လည်ရေးဆွဲခဲ့သည့် လပိုင်းအတွင်း အများဆုံးခွင့်ပြုခဲ့သည်မှာ ဘီယာချက် စက်ရုံများဖြစ်နေသည်က မည်သည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ခွင့်ပြုခဲ့ပါသနည်း ဆိုသည့်အပေါ် မေးခွန်းထုတ်စရာများစွာရှိနေသည်။၁၈၈၅ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံကို အင်္ဂလိပ်တို့ သိမ်းယူပြီးချိန်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိ နှစ်ပေါင်း ၁၂၆ နှစ်တာကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဘီယာချက်စက်ရုံ သုံးရုံသာ ရှိခဲ့ရာမှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လမှ ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ မေလ ၁၁ လတာကာလအတွင်း အောက်ပါကုမ္ပဏီ ငါးခုကို နောက်ထပ် အရက်နှင့် ဘီယာချက်စက်ရုံ ခုနစ်ရုံ ခွင့်ပြုလိုက်ခြင်းအပေါ် စောင့်ကြည့်ဝေဖန်သူတို့က ရိုးသားစွာ ခွင့်ပြုခဲ့ ခြင်းဟုတ်မဟုတ်၊ မည်သည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဆိုသည်ကို မေးခွန်းများစွာမေးရန် ရှိလာသည်။(၁) ၂၀၁၂ ဇူလိုင် ၁၁၊ ဘီယာထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့် (ရွှေသံလွင်စက်မှုဇုန်) သံလွင်ဧရာကုမ္ပဏီ(မြန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ ခွင့်ပြု)(၂) ၂၀၁၃ ဇန်န၀ါရီ ၃၀၊ အဖျော် ယမကာ ထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့် (ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ တောင်ကြီး)၊Beer Chang Intl Co;ltd နှင့် Myanmar Distillery Co;ltd (နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေအရခွင့်ပြု)(၃)၂၀၁၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၊ ဘီယာထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့် (မင်္ဂလာဒုံ)၊ Diamond Mayson Co;ltd(မြန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရခွင့်ပြု) (ရန်ကုန်တွင် ခွင့်မပြုတော့ဘဲ မွန်ပြည်နယ်နှင့်ကရင်ပြည်နယ်တစ်ခုခုတွင် လုပ်ဆောင်ရန် ညွှန်ကြားထားသည်ဟု သိရ)(၄) ၂၀၁၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆၊ ဘီယာထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့် (ပဲခူး)၊ မြန်မာကားလ်စ်ဘတ်ကုမ္ပဏီ(နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ ခွင့်ပြု)(၅) ၂၀၁၃ မေ ၁၀၊ Heinekin ဘီယာ ချက်စက်ရုံ(မှော်ဘီ)၊ APB Alliance Brewery Co;ltd နှင့်Alliance Brewery co;ltd-Myanmar၊ (နိုင်ငံခြားရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ ခွင့်ပြု) (ယခင်နိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ လျှောက်ထားခြင်းမှ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အဖြစ် ပြောင်းလဲလျှောက်ထား)ယမကာ သောက်သုံးခြင်းကြောင့် အသည်းရောဂါဖြင့် သေဆုံးနေသည့် ဆယ်ကျော်သက်များတစ်နေ့တခြားများပြားလာနေကြောင်း လေ့လာချက်များအရ တွေ့ရှိထားချိန်တွင် ယခုကဲ့သို့ ဘီယာချက်စက်ရုံများကို လွယ်လွယ်ကူကူ လိုသည်ထက်ပိုပြီး ခွင့်ပြုပေးနေသည်မှာ မစဉ်းစားတတ်အောင်ပင်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းဆရာဝန်တစ်ဦးက ပြောကြားလာသည်။ယမကာသောက်သုံးမှုသည် မြန်မာ နိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံအရရော၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လက်ခံကျင့်သုံးနေသည့် ဘာသာရေးအရပါ လက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်း ယခုအခါ ဆယ်ကျော်သက် မိန်းမငယ်လေးများပါ ဘီယာ ယဉ်ကျေးမှုအတွင်း စီးမျောနေကြသည်မှာ လက်မခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာတွင် ယမကာဈေးနှုန်းကို မြင့်မားစွာ ရောင်းချခြင်း၊ အချိန်ကန့်သတ်ချက်၊အသက်ကန့်သတ်ချက်ဖြင့် ရောင်းချခြင်းများပြုလုပ်နေသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘီယာနှင့်အရက်ကို အသက်အရွယ်မရွေး၊ အချိန်နှင့် နေရာမရွေး ဈေးသက်သာစွာဖြင့် ၀ယ်ယူရရှိနေသည်မှာလူငယ်များ၏ အကျင့်စာရိတ္တကိုပါထိခိုက်ပျက်စီးစေကြောင်းဝေဖန်စောင့်ကြည့်သူတစ်ဦးကပြောကြားသည်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင် အခွန်ဆောင်မှုအပေါ် အခြေခံတွက်ချက်ထားသည့် စာရင်းဇယားများအရ၂၀၁၂ ခုနှစ် ပြည်တွင်း အရက်မျိုးစုံ ပုလင်းပေါင်း (၁၇၂ ဒသမ ၂)သန်း၊ ဘီယာပုလင်းမျိုးစုံ (၆၇ဒသမ ၉၇)သန်း ရောင်းချခဲ့ကြောင်း သိရသည်။အဆိုပါစာရင်းတွင် စည်ဘီယာများ၊ ဘီယာသံဘူးများ၊ ပြည်ပမှ တင်သွင်းသည့် တရားမ၀င် အရက်ဘီယာများ မပါရှိပေ။ဘီယာ သံဘူးမျိုးစုံ နှင့် စည်ဘီယာကိုပါ ထည့်သွင်း တွက်ချက်ပါက မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဘီယာပုလင်းနှင့် သံဘူးမျိုးစုံ အရောင်းမှာ သန်း ၁၆၀ အထက် ရှိမည်ဟု စီးပွားရေးပညာရှင်တစ်ဦးကတွက်ချက်ပြသည်။အရက်ဘီယာ ယမကာထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရန် ခွင့်ပြုခြင်းသည် အစိုးရကို အခွန်အကောက်တိုးမြှင့်ရရှိစေသည်မှလွဲပြီး တိုင်းပြည်အတွက် မည်သည့်အကျိုးမှမရှိဘဲ ရေရှည်တွင် လူမှုရေးဆိုင်ရာ ဆိုးကျိုးများဖြင့်သာ ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ထုတ်လုပ်ရောင်းချသူများအတွက်မူ အမြတ်အစွန်း ကြီးမားသော လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ဘီယာအရက်သောက်သုံးသဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုများအပေါ် အရက်နှင့်ဘီယာကုမ္ပဏီများက မည်သို့တာဝန်ယူမည်နည်းဆိုသည်ကို မည်သည့် အရက်နှင့်ဘီယာကုမ္ပဏီကမှထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိပါ။သို့သော်လည်း ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်သည် အရက်နှင့် ဘီယာချက် စက်ရုံများကို သမိုင်းတစ်လျှောက် မကြုံဖူးအောင် ခွင့်ပြုပေးနေခြင်းသည် တိုင်းပြည်အတွက် မည်သည့်ကောင်းကျိုးရှိသဖြင့် ခွင့်ပြုပေးနေသနည်းဆိုသည်ကို ဖြေကြားစေလိုပါသည်။အရက်နှင့် ဘီယာသောက်သုံးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့်ဆိုးကျိုးများအပေါ် မည်သူက တာဝန်ယူမည်နည်းဆိုသည်ကို သိလိုပါသည်။ယခုဆောင်းပါးသည် တစ်ချိန်တွင် အရက်နှင့် ဘီယာများကြောင့် လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေးတွင် ထိခိုက်နစ်နာမှုများရှိပါက အထောက်အထားအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ရန် ရေးသားတင်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။မီဒီယာမျိုးစုံတွင် တတ်ကျွမ်းနားလည်သူများက ကန့်ကွက်နေပါလျက် အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကြောင့် အရက်နှင့် ဘီယာချက် စက်ရုံများ ဆက်လက်ခွင့်ပြုနေမည်ဆိုလျှင် ထိုခွင့်ပြုသူများသည်တစ်ချိန်တွင် သမိုင်းတရားခံများအဖြစ် မှတ်တမ်းအတင်ခံရမည်မှာ ဧကန်မလွဲ ဖြစ်ပေတော့သည်။မာဂျေ | မြန်မာတိုင်း(မ်)http://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWVနယ်စပ်၌ တရားမ၀င်သစ်ထုတ်ခြင်း တိုးလာPosted: 18 May 2013 07:00 AM PDTရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ် တောင်ပိုင်းတို့၌ တာရှည် ဖြစ်ပွားနေသည့် ပဋိပက္ခများကြောင့် တရားမ၀င် သစ်ထုတ်ယူခြင်းနှင့် တင်ပို့မှုတို့မှာ သိသိသာသာ တိုးလာကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ်အတွင်း ကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံတွင် တောပြုန်းခြင်းနှင့် မြေအခွင့်အရေးများကို လေ့လာနေသူ သုတေသန တစ်ဦးက ဧပြီလဆန်း လောက်က တရုတ်နယ်စပ်မြို့ ရူလီအနီး၌တွေ့ရှိခဲ့သည့် အဖြစ်ကြောင့် တုန်လှုပ်သွား ခဲ့ရကြောင်း ပြောသည်။လမ်း၏တစ်ဖက်တစ်ချက် ငါးမိုင်လောက်ရှည်လျားသည့်နေရာများ၌ သစ်ဆိုင်များကိုသာ တွေ့ခဲ့ရကြောင်း၊ နယ်စပ်အနီးသို့ ရောက်လာသည့်အခါတွင်လည်း စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှနေပြီး တန်ချိန် ၁၅-၂၀ တင်ဆောင်နိုင်သည့် ထရပ်ကား အစီးငါးဆယ်ခန့်ကို တွေ့ခဲ့ ရကြောင်း၊ ရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာ ပို၍လှုပ်ရှားသွားလာမှု ပို၍များကြောင်း၊ တစ်နေ့လျှင် ထရပ်ကား အစီး ၂၀၀ ခန့် မြန်မာနိုင်ငံဘက် (နမ့်ခမ်း) မှ တရုတ် နိုင်ငံ (နန်ဒေါင်) ထဲသို့ ၀င်ရောက်ကြောင်း ထိုသုတေသနပညာရှင်ကပြောသည်။အမည်မဖော်လိုသည့် ထိုသုတေသနပညာရှင်က သူသိရှိရသည့် သတင်းများမှာ ခိုင်လုံသည့်လေ့လာမှုများထက် ပုံပြင်ဆန်ပြီး မျက်မြင်သက်သေများ၏အပေါ်၌ အခြေခံကြောင်း ပြောသည်။ကချင်ဖွံ့ဖြိုးရေး ကွန်ရက်အဖွဲ့မှ အရာရှိ ဆိုင်းခါဆန်သည် ရှမ်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ်တို့၌ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ခရီးသွားလာသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၎င်းကိုယ်တိုင်က ဤသတင်းကို အတည်ပြုခဲ့သည်။လွန်ခဲ့သည့် ၁၈ လ အတွင်း၌ တရားမ၀င်သစ်ထုတ်လုပ်မှု သိသာများပြားခဲ့သည်ကို မျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ပြောသည်။သံလွင်မြစ် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်လျှောက် တရားမ၀င် သစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းကို တွေ့မြင်နိုင်ကြောင်းသူကပြောသည်။ဤတရားမ၀င်သစ်ကုန်သွယ်မှုမှာ နှစ်အတော်ကြာကတည်းက တရုတ် - မြန်မာနယ်စပ်တွင်ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သည်။၂၀၀၅ ခုနှစ်အကုန်နှင့် စောင့်ကြည့်အဖွဲ့ "Global Witness က China's Choice Ending theDestruction of Burma's Frontier Forests" အမည်ရှိ အစီရင်ခံစာကို ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးနောက် တရုတ်နှင့်မြန်မာအစိုးရ နှစ်နိုင်ငံစလုံးက ဤကုန်သွယ်မှုကို နှိမ်နင်းရန် ကြိုးပမ်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။မြန်မာသစ်တင်ပို့ခြင်းကို တရုတ်အစိုးရက ပိတ်ပင်လျက်၊ မြန်မာအစိုးရကလည်း အလားတူသစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းကို ပိတ်ပင်လျက်၊ ကချင်ပြည်နယ်၌ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းကိုလည်း ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။၂၀၀၉ ခုနှစ်က Global Witness ၏ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခု၌ နှစ်နိုင်ငံပိတ်ပင်မှုများကြောင့် ကချင်ပြည်နယ်၌ တရားမ၀င်သစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း သိသိသာသာလျော့ကျသွားပြီး တရုတ်နိုင်ငံနှင့်ဆက်စပ်ကုန်သွယ်မှုလည်း အလားတူဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။သို့သော်လည်း မကြာမီနှစ်များအတွင်း၌ အထူးသဖြင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် အစိုးရနှင့်ကေအိုင်အေ တို့ တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးနောက် တရားမ၀င်သစ်ဈေးကွက်မှာ ပြန်လည်ကြီးထွားလာခဲ့ပြီး လုံးဝဒဏ်ခတ်ခြင်း မခံရဘဲ ပြန်လည် လှုပ်ရှားအသက်ဝင်လာခဲ့သည်။သုတေသနပညာရှင်ယုံကြည်သည့် အဓိကအကြောင်းရင်း နှစ်ခုမှာ ကေအိုင်အေ တပ်သည်တရားမ၀င်သစ်များ ရောင်းခြင်းမှရသည့် အမြတ်အစွန်းများဖြင့် ၎င်း၏ စစ်တပ်ကို အင်အားဖြည့်ပြီးအစိုးရတပ်များနှင့် စစ်ဆင်နွှဲလျက်ရှိကာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး နှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ အရာရှိများသည်လည်း ပဋိပက္ခဖြစ်နေသည့် ဒေသများသို့ မသွားဝံ့ကြသည့်အတွက် အစိုးရထိန်းချုပ်သည့် ဒေသများအတွင်းရှိ ကျွန်းသစ်များမှာ အစောင့်အရှောက်မရှိ ဖြစ်နေကြ၏။ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၏ ပြောဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးအောင်မြတ်စံက ရှမ်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ်တို့တွင် ရှိကြသည့် အဖွဲ့အစည်းများမှ တရားမ၀င်သစ်ထုတ်လုပ်မှု တိုးလာသည့် သတင်းများ ၎င်းတို့ရုံး၌ မရရှိကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။နယ်စပ်ဒေသ၌ ပဋိပက္ခများရှိခြင်း နှင့် ဝေးလံခြင်းတို့ကြောင့် တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် တစ်လျှောက်ရှိအချို့ ဒေသများသို့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး နှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ ၀န်ထမ်းများသွားရောက်နိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း ဦးအောင်မြတ်စံက ၀န်ခံ ပြောဆိုခဲ့သည်။အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်၌ သစ်များတင်ဆောင်ထားသည့် ထရပ်ကားများ နယ်စပ်မှ တရုတ်နိုင်ငံတွင်းသို့ ၀င်နေသည့် သတင်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းရာ၌ သူ့ရုံးအနေဖြင့် မည်သည့်သတင်းမှမရရှိကြောင်း၊ သို့သော်လည်း ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း တရားမ၀င်သစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းကို အလွန်သတိထားကြောင်း ဦးအောင်မြတ်စံ က ပြောသည်။တရားမ၀င်သစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းကိစ္စ နှင့် ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းများကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ တရုတ်နိုင်ငံသံရုံးမှ ပြောဆိုခွင့်ရှိသူ မစ္စတာရှုန်ကိုဖုန်းက ပြန်လည် ဖြေကြားခြင်း မရှိပေ။တရုတ်အစိုးရသည် မြန်မာအစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းကာ နယ်စပ်ထိန်းချုပ်မှုကို အားဖြည့်ပြီး နယ်စပ်ကူးသည့် ရာဇ၀တ်မှု အလုံးစုံတို့ကို နှိမ်နင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း မစ္စတာ ရှုန်ကိုဖုန်းက ပြောကြားသည်။ဘီလ်အိုတူးလ်သောင်းညွန့် ဘာသာပြန်သည်။(မြန်မာတိုင်းမ်)တရုတ် နိုင်ငံဘက်သို့ ဦးတည်သွား နေသည့် သစ်တင်ကားများကို နယ်စပ်၌ တွေ့ရစဉ်။တရုတ်နိုင်ငံဘက်သို့ ဦးတည်သွားနေသည့် သစ်တင်ကားများကို နယ်စပ်၌ တွေ့ရစဉ်။http://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWVတာလောကြီး ဌာနေပြည်သူ့စစ် (၁)နှစ် အခမ်းအနားPosted: 18 May 2013 06:47 AM PDTကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်၊ တာလောကြီးဒေသမှာ၂၀၁၃-ခုနှစ်၊ မေလ (၁၆)ရက်နေ့က (၃၇)တပ်ရင်းနှင့်အတူ ပြည်သူ့စစ်အင်အား (၈၄၀)ကျော်ဖြင့် ပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့စည်းခြင်း (၁)နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားကို ရည်ရွယ်ချက် (၃) ရက်ဖြင့် သံဃာတော်များအား ဆွမ်းကပ်ခြင်း၊ စစ်ရေးပြခြင်း၊ ဟောပြောခြင်း၊ တိုင်းလိုင်(ရှမ်းနီ) ရှမ်းတိုင်းရင်းသား ရိုးရာအကများဖြင့် ပျော်ရွင်ပွဲ ကျင်းပခြင်း၊ ရိုးရာ လှေလှော်ပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ တာလောကြီးဒေသ၊ ဌာနေပြည်သူ့စစ် တစ်နှစ်ပြည့် အခမ်းအနား ကျင်းပရသော ရည်ရွယ်ချက် (၁) လက်နက်အားကိုး၍ ဗိုလ်ကျအနိုင်ကျင့်မှုမှ ကာကွယ်တားဆီးရေး (၂) မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အတူနေထိုင်ကြသော တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း အပြန်အလှန်လေးစားရေး (၃)KIO,KIA အဖွဲ့များလည်း ပြည်သူလူထု၏ ခံစားနေရသော ဒုက္ခများကို မျှဝေခံစားအလေးထား၍ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိအောင် ဆွေးနွေးရေး၊ စသည်တို့ကို ဦးတည်ရည်ရွယ်၍ ပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့စည်း ကျင်းပရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ပြည်သူ့စစ် (၁)နှစ်ပြည့် အခမ်းအနားသို့ (၁) ဒေါ်ခင်ပြုံးရည်၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး (၂) ဦးဖေသောင်း ကချင်ပြည်နယ် အမှတ်(၆) မဲဆန္ဒနယ် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၃) ဦးစံပြည့် ကချင်ပြည်နယ် အမှတ်(၇) မဲဆန္ဒနယ် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ဟောပြောမှုတွေလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဟောပြောချက်များမှ ကောက်နုတ်ချက် တစ်ချို့မှာ အတ္တကြီးမားသော လက်နက်ကိုင် လူမျိုးစုတွေကြောင့် တိုင်းလိုင်(ရှမ်းနီ) လူမျိုးစုတွေ လူအင်အား ရှိသော်လည်း ဘက်ညီသော အင်အားတွေ တည်ဆောက်ဖို့အတွက် လက်နက်ကိုင်ဖို့လို။ လက်နက်ကိုင်ခြင်းသည် သူတပါးကို အနိုင်ကျင့်ဖို့၊ နှိပ်စက်ဖို့မဟုတ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့နဲ့၊ သူတပါး လေးစားမှု ရနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်မှတ်ယူ ထားကြရန်ဖြစ်- စသည်တို့ဖြင့် တိုင်းလိုင်(ရှမ်းနီ)လူမျိုးစုများ၏ သမိုင်း၊ စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုတို့ကို ဟောပြောခဲ့ပြီး တိုင်းလိုင်(ရှမ်းနီ) ရှမ်းလူမျိုးများ၏ အမျိုးဘာသာ သာသသနာကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့၊ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း မြစ်ကြီးနားနှင့် ဧရာဝတီမြစ်ရိုးတလျှောက် မိမိတို့ပျောက်ဆုံးခဲ့သော နယ်မြေ ပြန်လည်သတ်မှတ် ပေးနိုင်ရေးတို့အပြင် လက်တလောမှာ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း တရုတ်နယ်စပ်များတဆင့် စိမ့်ဝင် ကျယ်ပြန့်လာနေတဲ့ မူးယစ်ဆေးအန္တရာယ်တို့ အကြောင်းကိုလည်း တက်တက်ကြွကြွ ဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေး ပျက်ပြားပြီး (၂)နှစ်ကာလ ကြာမြင့်လာသည့်တိုင်အောင် ပီပြင်သော ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး မဖေါ်ဆောင်နိုင်သေးသည့်အတွက် စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များ နေရပ်သို့ မပြန်နိုင်ကြသေးသည့်အပြင် မိမိတို့၏ လယ်ယာ လုပ်ငန်းများကိုလည်း KIA စစ်သား စုဆောင်းရေး အန္တရယ်နှင့် ထောင်ထားသော မိုင်းအန္တရယ်များကြောင့် ရွာနှင့် ဝေးလံသော နေရာများသို့ သွား၍ မလုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့သည့်မှာ (၂)နှစ် ရှိသွားပြီလည်းဖြစ်ပါသည်။ ယခုလို စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲများကြားမှ မိမိတို့၏ အသက်၊ အိုးအိမ်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ ပြည်သူ့စစ်တွေ ဖွဲ့စည်းခဲ့ရတာလည်း ဖြစ်တယ်လို့ ပြည်သူ့စစ်နာယက ဦးစန်းဝေမှ ပြောပြခဲ့ပါသည်။ဦးကော လေးby Myanmar News Nowရှမ်းတိုင်းရင်းသားရေးရာ ၀န်ကြီးမှ ဟောပြောနေစဉ်http://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWVမြန်မာ အနီး ဘင်္ဂလာရေပြင်တွင် လူသေအလောင်း ၇ လောင်း ထပ်မံ တွေ့ရှိPosted: 18 May 2013 06:29 AM PDTဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ ရေပြင်တွင် နောက်ထပ် လူသေ အလောင်း ၇ လောင်းကို ယမန်နေ့ နံနက်က ထပ်မံ ဆယ်ယူရရှိခဲ့သည်ဟု ဘင်္ဂလာရဲက ပြောသည်။ ယခု ဆယ်ယူရရှိသည့် အလောင်းများမှာ ကလေးငယ်များ ဖြစ်ကြပြီး တက်ကနက် မြို့နယ် အတွင်း ပင်လယ်ပြင်တွင် မျောပါနေ သည်ကို ဒေသခံများ၏ အကူအညီဖြင့် ဆယ်ယူခဲ့သည်ဟု ရဲတာဝန်ရှိသူများက ပြောသည်။ ---သတင်း အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ http://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWVမေလ ၂၀ ရက်နေ့ ထုတ် The Voice Weekly Vol.9/No.19Posted: 18 May 2013 06:15 AM PDTမေလ ၂၀ ရက်နေ့ ထုတ် The Voice Weekly Vol.9/No.19ဂျာနယ် ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါPdf ကို ဖတ်ရှုရန်အတွက် အောက်ပါလင့်မှ font ကို download ရယူပြီး မိမိ သုံးနေသော ကွန်ပျူတာတွင် Install လုပ်ပေးရပါမည်။http://www.mediafire.com/?ojojmbuhp3sq1jmhttp://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWVမေလ ၁၃ ရက်နေ့ ထုတ် ၇ ရက် ဈေးဝယ်လမ်းညွန်ဂျာနယ် အတွဲ(၃) အမှတ် (၃၉)Posted: 18 May 2013 05:53 AM PDTမေလ ၁၃ ရက်နေ့ ထုတ် ၇ ရက် ဈေးဝယ်လမ်းညွန်ဂျာနယ် အတွဲ(၃) အမှတ် (၃၉)ဂျာနယ် ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါhttp://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWVလုံခြုံရေးအတွက် အာမခံမှု မပေးနိုင်၍ အမျိုးသမီး အလုပ်သမား စေလွှတ်မှု စောင့်ကြည့်Posted: 18 May 2013 05:36 AM PDTမြန်မာ အမျိုးသမီးများ လုံခြုံရေးအတွက် ကိုးရီးယားဘက်မှ အာမခံမှု မပေးနိုင်၍ အမျိုးသမီး အလုပ်သမားများ စေလွှတ်မှုကို စောင့်ကြည့် နေဆဲဖြစ်ကြောင်း အစိုးရ ပြည်ပ အလုပ်အကိုင် အေဂျင်စီမှ သတင်းရရှိသည်။ အစိုးရ ပြည်ပ အလုပ်အကို အေဂျင်စီမှ တာဝန်ရှိသူတဦးက “စက်ရုံတခုမှာ အမျိုးသမီး အလုပ်သမား အချင်းအချင်း အဖော်ရအောင်လို့ တကြိမ်ကို နှစ်ယောက်မခေါ်ရင် မဖြစ်ဘူးလို့ ပြောထားတယ်။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် အမျိုးသမီးတွေ အတွက် လုံခြုံမှု မရှိနိုင်ဘူး” ဟုဆိုသည်။ ---သတင်း အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါhttp://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWVတရားမဝင်နယ်စပ် ဖြတ်ကျော်သူ မြန်မာနိုင်ငံသား ၂၀ ဦး ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ် ကျခံရဖွယ်ရှိPosted: 18 May 2013 05:29 AM PDTတရားမဝင် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ခိုးဝင်လာသူ အမျိုးသမီး ၂ ဦးအပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံ သား ၂၀ ဦး အား မဏိပူရပြည် နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့က လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဥပဒေ ချိုးဖောက်သည့်အတွက် သောကြာနေ့က တရားရုံးထုတ် စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း ယနေ့ထုတ် Sangai Express သတင်းစာတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ---သတင်း အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါhttp://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWVပြည်မြို့ ဧရာဝတီ မြစ်ကမ်းမှ အဆောက်အဦးကို မြို့ ခံတွေ ဆန္ဒပြ ကန့် ကွက်Posted: 17 May 2013 09:40 PM PDTပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး ပြည်မြို့တွင် ၁၇-၅-၂၀၁၃ ရက်နေ့ နံနက် ၀၈း၁၀ အချိန်ခန့် ပြည်မြို့၊ ဆံတော်ရပ်ကွက် ၊ ကမ်းနားလမ်း ၊ ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းနား သောင်ပြင်ကို မြေဖို့ပြီး အဆောက်အဦးကြီး တခု ဆောက်လုပ် နေသဖြင့် ဧရာဝတီမြစ်၏ အလှသဘာဝကို ဖုံးကွယ်နေခြင်း၊ မြစ်၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်စေခြင်းတို့ကြောင့် ယင်းအဆောက်အဦးအား ဖျက်သိမ်းပေးရန် ပြည်မြို့နေ လူထုက ၁၀၀ ခန့် က ကန့် ကွက် ဆန္ဒပြခဲ့ ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ---သတင်း အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါhttp://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWVလှိုင်သာယာ ကြိုးကြာဖြူ လူသတ်မှုမှ တရားခံဖမ်းမိPosted: 17 May 2013 09:25 PM PDT၁၆.၅.၂၀၁၃ ရက်နေ့ (၁၆၃၀)အချိန် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ကြိုးကြာဖြူ အထည်စက်ရုံ တွင် ဖြစ်ပွားသော စက်ရုံလုပ်သားချင်း စကားများရာမှ လူသတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ကြိုးကြာဖြူ အထည်ချုပ်စက်ရုံ လုပ်သားများဖြစ်သည့် သက်ပိုင်လင်း(ခ)လင်းလင်း နှင့် အလုပ်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် တေဇာကျော်တို့ ---သတင်း အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါတရားခံ တေဇာကျော်http://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWVသမ္မတဦးသိန်းစိန် VOA မှာ နယ်ပယ်စုံပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ မေးမြန်းမှုကို ဖြေကြားမည် Posted: 17 May 2013 08:31 PM PDTအမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကို နှစ်ပေါင်း ၅၀ နီးပါးအတွင်း မြန်မာ အစိုးရ သမ္မတ အဖြစ်နဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် ရောက်ရှိလာမယ့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ဟာ တနင်္ဂနွေနေ့ မှာတော့ ဗီအိုအေမှာ ပြုလုပ်မယ့် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ၊ ဘာသာရေး ၊ ပညာရေး စတဲ့ နယ်ပယ်စုံက လူပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ---သတင်း အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါအမေရိကန်သမ္မတရဲ့ နိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ် အမေရိကန်ကို သွားမယ့် သမ္မတဦးသိန်းစိန်က လိုက်ပါပို့ဆောင်သည့် ဝန်ကြီးများအား နှုတ်ဆက်နေစဉ်။ (မေ၊ ၁၇၊ ၂၀၁၃။)http://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWVရန်ကုန်မြို့တွင် စွန့်ပစ်အမှိုက်ပုံအတွက် မြေနေရာမရှိတော့Posted: 17 May 2013 08:17 PM PDTရန်ကုန်မြို့တိုင်း ဒေသကြီးတွင် နောက်ဆုံး စွန့်ပစ်အမှိုက်ပုံ အဖြစ် ထပ်မံ အသုံးနိုင်သည့် မြေနေရာ မရှိ တော့ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သန့်ရှင်ရေး ဌာနမှ သိရသည်။ လက်ရှိတွင် လှိုင်သာယာမြို့ နယ်ထိန်ပင်သုသာန် အမှိုက်ပုံနှင့် ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း မြို့နယ်အတွင်း ရှိ ထားဝယ်ချောင် အမှိုက်ပုံနှစ်ခု တို့ကို ---သတင်း အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါhttp://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWVအီရတ် ဘာသာရေး အုပ်စုကွဲတွေကြား တိုက်ခိုက်မှု လူ၆ဝ သေဆုံးPosted: 17 May 2013 07:31 PM PDTအီရတ် နိုင်ငံမှာ ဘာသာရေး အုပ်စုကွဲတွေကြား တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် အနည်းဆုံး လူ၆ဝ သေဆုံးသွားခဲ့ပြီး ဒါဟာ လပေါင်းများစွာ အတွင်း အသေအပျောက် အများဆုံးနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဂ္ဂဒက်မြို့တော်နဲ့ အနီးတဝိုက်က ဆွန်နီ မွတ်ဆလင်တွေ နေထိုင်ရာ ဒေသတဝိုက်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှု သုံးခု အနက် Baquba အရပ်က ဗလီအပြင်ဖက်မှာ သောကြာနေ့ ဝတ်ပြုသူတွေ ---သတင်း အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါအီရတ်က မြို့ကြီးတွေမှာ သွေးချောင်းစီးတဲ့ ပေါက်ကွဲမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့http://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWVမေလ ၁၇ ရက်နေ့ ထုတ် Focus Online ဂျာနယ် အမှတ် ၄၁Posted: 17 May 2013 07:42 PM PDTမေလ ၁၇ ရက်နေ့ ထုတ် Focus Online ဂျာနယ် အမှတ် ၄၁ဂျာနယ် ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါhttp://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWVမေလ ၁၆ ရက်နေ့ ထုတ် အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ(၂) အမှတ်(၁၉)Posted: 17 May 2013 07:15 PM PDTမေလ ၁၆ ရက်နေ့ ထုတ် အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ(၂) အမှတ်(၁၉)ဂျာနယ် ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါhttp://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWVမေလ ၁၆ ရက်နေ့ ထုတ် အိုင်တီတိုင်းမ် ဂျာနယ် အမှတ် ၈၇၀Posted: 17 May 2013 07:42 PM PDTမေလ ၁၆ ရက်နေ့ ထုတ် အိုင်တီတိုင်းမ် ဂျာနယ် အမှတ် ၈၇၀ဂျာနယ် ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါhttp://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWVမေလ ၁၆ ရက်နေ့ ထုတ် ပြည်မြန်မာ သတင်း ဂျာနယ် အမှတ် ၈၇၀Posted: 17 May 2013 07:40 PM PDTမေလ ၁၆ ရက်နေ့ ထုတ် ပြည်မြန်မာ သတင်း ဂျာနယ် အမှတ် ၈၇၀ဂျာနယ် ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါhttp://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWVမေလ ၁၅ ရက်နေ့ ထုတ် Good Health ကျန်းမာရေးနှင့် အလှအပ ဂျာနယ် အမှတ် ၄၃၆Posted: 17 May 2013 07:40 PM PDTမေလ ၁၅ ရက်နေ့ ထုတ် Good Health ကျန်းမာရေးနှင့် အလှအပ ဂျာနယ် အမှတ် ၄၃၆ဂျာနယ် ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါhttp://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWVသမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အမေရိကန် ထွက်ခွာPosted: 17 May 2013 05:22 PM PDTနှစ်ပေါင်း ၅၀ နီးပါး အတွင်း မြန်မာ သမ္မတ တစ်ယောက်ကို အမေရိကန် အိမ်ဖြူတော်က ပထမဆုံး အကြိမ် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တဲ့ ခရီးစဉ် အတွက် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ဟာ သောကြာနေ့က ဝါရှင်တန် မြို့တော်ကို ထွက်ခွာ ဖို့ ရှိပါတယ်။ သမ္မတ အိုဘားမားနဲ့ မေလ ၂၀ ရက်နေ့ ကျရင် အိမ်ဖြူတော်မှာ တွေ့ဆုံ မယ်လို့ အမေရိကန် အစိုးရ ဘက်က ထုတ်ပြန်ပေမဲ့ ဒီခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာ အစိုးရ ဘက်ကတော့ တစုံတရာ ထုတ်ပြန်တာ မရှိ ပါဘူး။ ---သတင်း အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ပထမအကြိမ် ခရီးစဉ်မှာ သမ္မတ အိုဘားမားကိုရော အဲဒီတုန်းက နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး နဲ့ပါ တွေ့ဆုံခဲ့http://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWVမအူပင်မှာ သိမ်းယူထားတဲ့ လယ်ယာမြေတွေ ပြန်ပေးမည်Posted: 17 May 2013 05:08 PM PDTဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး၊ မအူပင်ခရိုင်၊ မလက်တို ကျေးရွာအုပ်စုမှာ သိမ်းဆည်းထားတဲ့ လယ်ယာမြေဧက ၄၅၀ ကို လယ်သမားတွေထံ ပြန်ပေးမယ်လို့ မလက်တိုကျေးရွာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်က ဒီနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့ အစီရင်ခံစာထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။မလက်တိုကျေးရွာအုပ်စုမှာ လယ်ယာမြေ အစီရင်ခံစာမှာ ပါဝင်တဲ့အချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မအူပင်ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးအေးသောင်းက မလက်တိုကျေးရွာအုပ်စုမှာ အသိမ်းခံထားရတဲ့ လယ်ဧက တစ်ထောင်ထဲက ဧက ၄၅၀ ကို လယ်သမားတွေလက်ထဲ အပြီးအပိုင် ပြန်လည်ပေးဖို့ စီစဉ်ထားပြီး ကျန်ရှိတဲ့လယ်ဧက ၅၅၀ ထဲက ၁၂၈ ဧကကိုလည်း လယ်သမားတွေဘက်က အထောက်အထားပြနိုင်ရင် ပြန်ပေးဖို့ကိုပါ ကော်မရှင်က စီစဉ်ထားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။အဲဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ဟာ ဖေဖေါ်ဝါရီလကုန်ပိုင်းက တောင်သူလယ်သမားတွေနဲ့ ရဲဝန်ထမ်းတွေကြား ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရင်းကို ဖော်ထုတ်ဖို့ မတ်လ ၄ ရက်နေ့က ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်မေလ ၂၇ ရက် နေ့မှာ အသိမ်းခံထားရတဲ့ လယ်မြေတွေရဲ့ လျော်ကြေးကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖြေရှင်းပေးမယ့်အကြောင်း အာဏာပိုင်တွေက ဒေသခံတွေကို မနေ့ကခေါ်ယူတွေ့ဆုံ ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ မလက်တိုကျေးရွာအုပ်စုက လယ်သမား ဦးသန်းလှိုင်က ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖေါ်ဝါရီကုန်ပိုင်းအတွင်း လယ်သမား ၃၀၀ လောက်ဟာ အသိမ်းခံထားရတဲ့ လယ်ယာမြေကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ တင်းမာမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာမှာ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုအတွင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်ပြီး လူစုခွဲတဲ့အတွက် လယ်သမား ၉ ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့သလို ဒေသခံရွာသားတွေရဲ့ ရိုက်နှက်မှုကြောင့်လည်း ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့က ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၂၆ ဦးဒဏ်ရာတွေ ရရှိခဲ့ပါတယ်။RFA Burmesehttp://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWVမြန်မာအပေါ် ဒဏ်ခတ်မှု သက်တမ်းတိုးဖို့ အမတ် Crowley အဆိုပြု Posted: 17 May 2013 05:04 PM PDTမြန်မာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကို တရားဝင်ခရီးစဉ် လာရောက်မယ့် ရက်ပိုင်းအလိုမှာပဲ မြန်မာနိုင်ငံက ပို့ကုန်ပစ္စည်းတွေ၊ အထူး သဖြင့် ကျောက်မျက် ရတနာတွေ အမေရိကန်နိုင်ငံထဲ တင်ပို့မှုကို ပိတ်ပင်တဲ့ ဥပဒေတရပ် သက်တမ်းတိုးဖို့ အမေရိကန်လွှတ်တော်မှာ သြဇာညောင်းတဲ့ လွှတ်တော် အမတ်တဦးက လွှတ်တော်ကို အဆိုပြုလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ တွင်းက အခြေအနေတွေဟာ ပိတ်ဆို့ ဒဏ်ခတ်မှုတွေ ဆက်ပြီးရှိနေဖို့ လိုအပ်နေသေးတယ်ဆိုတာကို သတိပေးတဲ့အနေနဲ့ ခုလို ဥပဒေသက်တမ်း တိုးဖို့အဆိုကို သမ္မတဦးသိန်းစိန် ခရီးစဉ်နဲ့ အချိန်ကိုက်တင်သွင်းတာဖြစ်တယ်လို့ ယူဆတဲ့အကြောင်း ၀ါရှင်တန်အခြေစိုက် မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ US Campaign for Burma ကပြောပါတယ်။ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ မခင်ဖြူထွေးက အပြည့်အစုံ ပြောပြပေးပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံက ပို့ကုန်ပစ္စည်းတွေ၊ အထူးသဖြင့် ကျောက်မျက်ရတနာတွေ အမေရိကန်နိုင်ငံထဲ တင်ပို့မှုကို ပိတ်ပင်တဲ့ Burma Freedom and Democracy Act လို့ခေါ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်မြောက်ရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီ အက်ဥပဒေကို သက်တမ်းတိုးဖို့ ဒီမိုကရက် အထက်လွှတ်တော် အမတ် Joseph Crowley နဲ့ ရီပက်ပလစ်ကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် Peter King တို့က ကွန်ဂရက်စ် လွှတ်တော်ကို အဆိုပြု တင်သွင်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုတွေအပေါ် ဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ဆက်ပြီး ရှိနေသေးတာကြောင့် အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ မြန်မာအပေါ် ချမှတ်ထားတဲ့ ပိတ်ဆို့ ဒဏ်ခတ်မှုတွေကို ဆက်ပြီးချမှတ်ထားဖို့ လိုအပ် နေသေးတယ်လို့ မစ္စတာ Crowley က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း မေလကနေစလို့ ရက် ၉၀ အတွင်း ဒီဥပဒေ သက်တမ်းတိုးဖို့ ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်မှာ မဲပေးဆုံးဖြတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာတော့ တိုက် တိုက်ဆိုင်ဆိုင် မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အမေရိကန် တရားဝင် ခရီးစဉ်နဲ့ အချိန် ကိုက် လွှတ်တော်အမတ်တချို့က ဒီဥပဒေသက်တမ်း တိုးဖို့ ပြောလာခဲ့တာ ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာ ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုတွေ ဆက်ရှိဖို့ လိုအပ်နေသေးတယ်ဆိုတာကို သိသာထင်ရှားစေဖို့အတွက် သမ္မတဦးသိန်းစိန် ခရီးစဉ် ရက်ပိုင်းအလိုမှာ အခုလို လွှတ်တော်ကို ချိန်ကိုက်တင်သွင်းပုံ ရတယ်လို့ ၀ါရှင်တန်ဒီစီအခြေစိုက် မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ US Campaign for Burma က လှုပ်ရှားမှုတာဝန်ခံ Rachel Wagley က ပြောပါတယ်။“ဒါ တမင်ရည်ရွယ်ပြီး ချိန်ကိုက်လုပ်တာပါ။ ကျမတို့ အရင်ကတည်းက သတ်မှတ် ထားတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ မူဝါဒတွေကို ဆက်လက် ချမှတ်သွားနိုင်ဖို့ တမင်ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့ခုချိန်မှာ သက်တမ်းတိုးဖို့ လုပ်ရလဲဆိုတော့ ကျမတို့အနေနဲ့ မြန်မာအစိုးရကို သာမက အမေရိကန် အစိုးရ ကိုပါ သတင်းစကားပါးချင်တာ ရှိပါတယ်။ အဲဒါက အမေရိကန်အနေနဲ့ လိုက်လျောဆောင်ရွက်မှုတွေ ဆက်လုပ် နေတာ၊ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကို ဂုဏ်ပြုနေတာတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပကတိ အခြေအနေနဲ့အညီ တုံ့ပြန်တာ ထက် ပိုနေတယ်ဆိုတာပါ။ တကယ့် ပကတိအခြေအနေမှာက စစ်တပ်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ ပိုများလာနေသလို သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ကလည်း နိုင်ငံ အနှံ့မှာ ရှိနေတုန်းပါ။ ဆိုတော့ ဒီ အက်ဥပဒေကို သက်တမ်းတိုးခြင်းအားဖြင့် လွှတ်တော်အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ မှုတွေကို ခိုင်ခိုင် မာမာ တိုးမြှင့် မဆောင်ရွက်ဘဲနဲ့ ဒီပိတ်ဆို့မှုတွေ ပယ်ဖျက်ပေး မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။”အမေရိကန်အစိုးရဟာ လောလောဆယ်မှာ မြန်မာအစိုးရကို လိုအပ်တာထက် ပိုပြီး လိုက်လျောနေတယ်လို့လည်း US Campaign အဖွဲ့က ဝေဖန် ပါတယ်။ မြန် မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး မလွတ်မြောက်သေးတာ၊ တိုင်းရင်း သားဒေသတွေမှာ စစ်တပ်ရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် ဆက်လက် ရှိနေသေးတဲ့အချိန်မှာ အမေရိကန်အနေနဲ့ ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့မှုတွေကို ထပ်ပြီးတော့ မလျှော့ပေးသင့်ဘူးလို့ Rachel Wagley က ပြောပါတယ်။“ကျမတို့ရဲ့ အဓိက ပြဿနာက ပြောရရင် အမေရိကန်အစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံတွင်း အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရမှာ ထက်ကို ကျော်လွန်ပြီးတော့ လိုက်လျောတုံ့ပြန်နေတဲ့ကိစ္စပါ။ လက်တွေ့ အခြေအနေကိုကြည့်ရင် မြန်မာအစိုးရ စစ်တပ်ဟာ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေ အပေါ် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေ ကျူးလွန်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အတင်း အဓမ္မပြုကျင့်မှုတွေနဲ့ ကျူးလွန်သူတွေကို တရားဥပဒေက ကင်းလွတ်ခွင့်ပြု ထားနေ တုန်းပါ။ ဆိုတော့ ကျမတို့အနေနဲ့ကတော့ အမေရိကန်က ပိတ်ဆို့ မှုတွေ ပြန်ရုပ် သိမ်းဖို့ဆိုရင် အရင်ဆုံးအနေနဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို ချွင်းချက်မဲ့ပြ...[Message clipped] View entire message Categories: Myanmar Blogs Pages« first